किचेन रोबोटहरू - कुन म छनौट गर्नुपर्दछ, मोडेलहरू र फाइदाहरू? | बेजिया
सुसाना Godoy | 09/06/2021 16:00 | पाक कला
यो एक प्रश्न हो जुन हामी आफैलाई सबैभन्दा धेरै सोध्न सक्छौं र यो यो हो कि त्यहाँ धेरै र विविध छन् भान्छा रोबोटहरु जुन हामीसँग बजारमा छ। त्यसोभए कहिलेकाहिँ हामीलाई एउटा छनौट गर्न केही बेर गाह्रो हुन्छ। हामीलाई थाहा छैन कि यसमा सुरूवात गर्नु अघि हामीले के हेर्नु पर्छ, त्यसैले आज हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न जाँदैछौं।
हामी तपाईंलाई सबै भन्दा राम्रो सल्लाह र सबै सटीक जानकारी दिनेछौं ताकि तपाइँको छनोट तपाइँको आवश्यकता को लागी एक उत्तम हो। किनभने हामी सबैको एक समान छैन, तर हामी एक राम्रो र दिगो खरीद गर्न चाहन्छौं। त्यसोभए, तपाईं राम्रो हातमा हुनुहुन्छ र अब हामी तपाईंलाई देखाउन जाँदै छौं।
1 खाना पकाउन सबै भन्दा राम्रो रोबोट के हो
2 सबैभन्दा धेरै बिक्रि भान्छाको रोबोट के हो
3 भान्साको रोबोटका फाइदाहरू के हुन्
खाना पकाउन सबै भन्दा राम्रो रोबोट के हो
कुनै श doubt्का बिना त्यहाँ धेरै ब्रान्ड र धेरै मोडेलहरू तपाईंसँग मार्केटमा छन्। तर ती सबै मध्ये, तपाईं जहिले पनि तिनीहरूलाई खरीद गर्नु अघि चरणहरूको एक श्रृंखलाको बारेमा सोच्नुहोस्। किनभने यो सत्य हो कि ती महान लाभहरू छन् तर ती हाम्रो जीवनमा अनुकूलित हुनुपर्दछ।
हाम्रो भान्छा मेशिनको क्षमता आधारभूत बिन्दु मध्ये एक हो। किनकि हामी यसलाई हामी बस्ने डाइनरको अनुसार मूल्याating्कन गर्नेछौं। यदि तपाइँ खानको लागि सामान्यतया चार व्यक्ति हुनुहुन्छ भने, यो घरमा दुई वा सायद केवल एक जना बस्ने जस्तो हुनेछैन। त्यसोभए तपाईंसँग दुई लिटर मोडेल साथै5लिटर छ।
पावर मुख्य बुँदाको अर्को हो। किनभने अधिक शक्ति अधिक शक्तिसँग पर्यायवाची छ र यो लामो समयसम्म र राम्रो परिणामहरूको साथ रहनेछ। कसैसँग W००W पावर छ, जबकि अरुसँग १०००W भन्दा बढि छ।
यससँग प्रकार्यहरू हेर्नुको अर्को विचार हो। किनभने केहीको १२ कार्यहरू हुन्छन् र अरू 12 भन्दा माथि। राम्रो कुरा के हो भनेर जान्नको लागि कुन यसले ल्याउँदछ र सोच्नुहोस् कि यो उनीहरूसँग आउँदछ यदि तपाईं सामान्य रूपमा तयार पार्ने खानाको आधारमा। सब भन्दा आधारभूत मोडेलहरुमा पहिले नै मुख्य र आवश्यक कार्यहरू छन्।
उनीहरूसँग जति बढी कार्यहरू हुन्छन्, तिनीहरूको सुविधाका लागि उनीहरूले थप सामानहरू पनि प्रदान गर्दछन्।
तपाईंले निश्चित गर्नुपर्दछ कि पार्टहरू र अन्य सामानहरू सफा गर्न सजीलो छन् वा तिनीहरू डिशवाशरमा जान सक्छन्।, सँधै समय बचत गर्दै।
सबैभन्दा धेरै बिक्रि भान्छाको रोबोट के हो
यदि तपाईंलाई आश्चर्य लाग्छ कि सब भन्दा राम्रो किचन रोबोट हो भने, हामी तपाईंलाई केवल एउटा उत्तर दिन सक्दैनौं किनकि त्यहाँ धेरै विन्दु छन्। तर त्यहाँ केहि छन् जुन आफैंलाई अमेजनमा सब भन्दा बेच्ने रोबोटको रूपमा स्थित छन्।
पहिलो स्थान रोबोट Cecotec Mambo मा जान्छ योसँग functions० प्रकार्यहरू, 30 लिटर क्षमता छ, साथ साथै एक रेसिपी बुक पनि छ र डिशवाशर सुरक्षित छ। यदि तपाईंलाई राम्रो सहयोगी चाहिएको छ भने, कृपया यो किन्नुहोस् यहाँ.
अवश्य यदि तपाईं अझै थोरै पैसा बचत गर्न चाहानुहुन्छ भने तर तपाईंको छेउमा उत्तम विकल्पहरू छन्, त्यहाँ यो मोडेल छ जुन तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ र यो अर्को बेचिन्छ यहाँ उही पहिलो 900 ००W र सब भन्दा आवश्यक फंक्शनहरूको साथ, जबकि दोस्रोमा pre पूर्व-कन्फिगर गरिएको मेनू र liters लिटर क्षमता छ।
La ब्रान्ड Moulinex योसँग किचन रोबोटको धेरै मोडेलहरू छन् जुन आफैंलाई सर्वश्रेष्ठ विक्रेताहरूको बीचमा राखेका छन्। ती मध्ये एक 3,6..5 लिटर क्षमताको साथ एक हो, साथै एक नुस्खा पुस्तक र automatic स्वचालित प्रोग्रामहरू जुन हामीले फेला पार्‍यौं यहाँ.
भान्साको रोबोटका फाइदाहरू के हुन्
हामीले यसलाई हेर्दा हामीले के हेर्नुपर्दछ भनेर हेरिसक्यौं, साथ साथै केही उत्कृष्ट बिक्रि गर्ने मोडेलहरू पनि। खैर, यी सबै कुरा थाहा पाएर, यो केवल फाइदामा ध्यान केन्द्रित गर्न बाँकी छ।
तिनीहरूले हाम्रो भान्छामा समय बचत गर्छन्, किनकि तिनीहरू प्रोग्रामेबल हुन् र सबै कामहरू गर्नेछन् हामीलाई बिना बाँकी रहेको।
दुबै तापमान र समय विनियमित छन् जुन एक राम्रो परिणाम मा बराबर छ।
तिनीहरूसँग नुस्खा पुस्तकहरू छन् जसले हामीलाई विभिन्न तरिकाले भाँडा तयार पार्न मद्दत गर्दछ।
एकचोटि समाप्त भएपछि तपाईं सफा गर्न यति धेरै छैन र तपाईंको भान्छा पूरै भन्दा बढि हुनेछ सँधै
तिनीहरू शक्तिशाली छन् र बढ्दो कम्प्याक्ट डिजाइन छ त्यसो भए तिनीहरूले धेरै ठाउँ लिदैनन्।
पक्कै पनि यी सबै पछि, तपाइँले तपाइँलाई दिन - दिनमा एकीकृत गर्न अगाडि दिनुहुनेछ! भान्साको मेशिनहरूले तपाइँलाई सँधै मद्दत गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » घर » पाक कला » किचेन रोबोट, मैले कुन छनौट गर्नु पर्छ?
मासिमो दुट्टी नयाँ प्रकाशन घर प्रस्तुत गर्दछ SS21: नयाँ एडी